ဤသည်အကြားအမြင်ရအလယ်အလတ် Skype နဲ့ဖုန်းကျော်ဖတ်လို့ရနိုင်မသက်သေပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ - အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ဖတ်
အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ဖတ် > ဗီဒီယိုများ > ဤသည်အကြားအမြင်ရအလယ်အလတ် Skype နဲ့ဖုန်းကျော်ဖတ်လို့ရနိုင်မသက်သေပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။
Megan မတ်လ 23, 2017 ဗီဒီယိုများTagged အဘိဥာဏ်လအော adimmix, ကျောက်သလင်းကလေးများအဘိဥာဏ်စာအုပ်များ, အခမဲ့အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ချက်တင်, အခမဲ့အဘိဥာဏ်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို, အဘိဥာဏ်အသကျရှငျ, အဘိဥာဏ်အွန်လိုင်းအသက်ရှင်နေထိုင်, တိုက်ရိုက်လွှအကြားအမြင်, အဘိဥာဏ်စာဖတ်ခြင်းကိုချစ်, အဘိဥာဏ်ဖတ်ကိုချစ်, mediumship, အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်, ဖုန်းကိုအဘိဥာဏ်, အဘိဥာဏ်, အဘိဥာဏ် (အလုပ်အကိုင်), အဘိဥာဏ်လအော, အဘိဥာဏ်စာဖတ်ခြင်း, အဘိဥာဏ်ဖတ်, အကြားအမြင်, Skype ကို (Software များ), ဝိညာဉ်ရေးရာအဘိဥာဏ်ဖတ်, သင့်ရဲ့အဘိဥာဏ်စမ်းသပ်ရန်, အဘိဥာဏ်ဟာကြည်လင်ကလေးများ4 မှတ်ချက် ဒီအပေါ်အကြားအမြင်ရအလယ်အလတ် Skype နဲ့ဖုန်းကျော်ဖတ်လို့ရနိုင်မသက်သေပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။
မတ်လ 23, 2017 မှာ 10: 53 နံနက်
ကောင်းတဲ့ဟေး! အိုင်ဒီ skype ပေါ်တွင်သင်ပေါင်းထည့်လိုငါသည်အဘယ်သို့သင်၏အ skype ကအသုံးပြုသူအမည်ကိုမေးပါမည်နည်းသငျသညျအကြှနျုပျကို add ချင်ပါတယ်လျှင်ငါ၏အ skype က chadvan5 ဖြစ်ပါသည်
မျှော်လင့်ချက် Paranormal အဖြူရောင်အလင်း says:
အေးမြကဗီဒီယို, supporting ကိုချစ်။ ငါတို့ကဲ့သို့ကောင်းစွာအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုထုတ်စစ်ဆေးပါ။ ငါသည်သင်တို့ကိုအလွန်ကွဲပြားခြားနားသောင်သဘောတူလိမ့်မယ်ထင်တယ်🙂
Evette သောင်တင် says:
ငါအဘိဥာဏ်ဖြစ်ဖို့တောင်းဆိုနဲ့တကယ့်ဆုကြေးဇူးကိုသူအစစ်အမှန်သူတို့အတှကျက့ဝှက်ချက်များကိုပျက်စီးစေလို့တဲ့အရှက်ကွဲထွက်ရှိ con အနုပညာရှင်တွေရှိပါတယ်သေချာပါတယ်။ လူတိုင်းကကိုယ့်အချို့ထဲသို့ပုတ်ကြပြီမဟုတ်ရဲ့အဘိဥာဏ်စွမ်းရည်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာဘော့သူသည်ဤဘုရားသခင်ထံမှလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာမယုံနိုငျအောငျတံခါးပိတ်စိတ်ကြောင်းဝမ်းနည်းဖွယ်ပါပဲ။ ငါက Chris နဲ့တူငါ့ကိုယ်ပိုင်စွမ်းရည်ရှိသည်မဟုတ်, ဒါပေမယ့်ငါသူအချို့ရှိဘူးငါကသူတို့ကိုရှိသည်ဖို့အလွန်မင်္ဂလာရှိသောခံစားရတယ်။ အဘယ်အရာကိုပြုလုပ်နိုင်စွမ်းဘော့ရှိသည်သောကလေးများကော? သူတို့သိပ်စိတ်မမှန်ဖြစ်ပါသလား ဒါကလုပ်ထိုကဲ့သို့သောမတရားကြေညာချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အခြို့သောခရစ်ကဲ့သို့အစစ်အမှန်သဘောတူညီချက်ကြောင့်သင်တို့ကိုအတုဖြစ်ခြင်းသို့လူအပေါငျးရုံမပြုလုပ်သင့်။